Sidee Ayaan Ugu Hormariyey Sawiradayda Muuqaalka Leh Ee Loogu Tala Galay Warbaahinta Bulshada Iyo Kordhinta Isku Socodka Bulshada 30.9% | Martech Zone
Isniin, Maarso 1, 2021 Wednesday, April 27, 2022 Douglas Karr
Dabayaaqadii Nofeembar ee la soo dhaafay, waxaan go'aansaday inaan tijaabiyo tijaabinta sawirro muuqaal ah waayo, warbaahinta bulshada si loo eego haddii ay wax faa iido ah yeelanayso. Haddii aad wax aqrin jirtay ama aad ka mid ahayd macaamiisha in muddo ah, waxaad ogtahay inaan si joogto ah ugu adeegsado degelkeyga tijaabooyinkayga.
Naqshadaynta sawir soo jiidasho leh oo lagu wadaago baraha bulshada waxay ku darsaneysaa 5 ama 10 daqiiqo diyaarinta maqaalka sidaa darteed maahan maalgashi badan oo waqti ah… laakiin daqiiqadaha marwalba waa la isku daraa waxaana doonayaa inaan ka taxadaro inaan waqtigayga si caqli gal ah u galiyo markay tahay Martech Zone.
Intii aan isticmaali jiray uun sawirro kayd ah oo matalayay waxa ku jira, waxaan si ula kac ah u dhisay sawir muuqda oo leh waxyaabaha soo socda:
size - Waxaan ku dhex dhisay template muujiye taasi 1200px balaaran 675px dheer. Waxaan sidoo kale wax ka beddelay mawduucayda si aan u muujiyo sawirrada qiimahan la hagaajiyay.
brandingeksperten - Kuma soo daro magaca barta laakiin marwalba waxaan kudarsadaa astaanta si markaa si joogto ah loogu aqoonsado cusbooneysiinta baraha bulshada.
Title - Cinwaan qasab ah oo aan had iyo jeer u dhigmin qoraalka dhabta ah ee maqaalkeyga. Waxaa laga yaabaa inaan ku hagaajiyo cinwaanka boostada raadinta laakiin dib ugu qoro cinwaanka sawirkeyga si aan isugu dayo inaan wado qasabno badan.
Image - Waxaan haystaa rukumo Depositphotos halkaas oo aan si fudud uga raadin karo ugana heli karo sawirro waaweyn oo aan kala soo bixi karo oo aan ku dari karo.
Waxaan markaa isticmaalaa FeedPress si toos ah qoraaladayda ugu daabacaan kanaalkeyga bulshada. natiijadu waa tweet ama cusbooneysiin Facebook ah oo runtii taagan. Waa tan sida ay u egtahay Twitter:
Sidee Suuq-geynta Dijitaalku U Quudinayaa Maska Iibkaaga https://t.co/QMp6i6aq18 #marshada pic.twitter.com/3o1O2D6ssB
- martech zone (@nacaybtire) February 28, 2021
Iyo dusha LinkedIn:
Sababtoo ah cinwaannada ayaa lagu qoraa Ingiriis, waxaan sameeyay falanqeyn bilihii la soo dhaafay, waxaan ka saaray wixii fariimo fayras ah, waxaanan ku koobay dhagaystayaasha Maraykanka, Kanada, Boqortooyada Ingiriiska, New Zealand iyo Australia. Natiijooyinka ayaa aad u naxdin badan…
Google Analytics gudaheeda, falanqeyn muddo-dhaaf ah oo ku saabsan gudbintayda warbaahinta bulshada ayaa keentay a 30.9% kororka aragtida bogga ee ka imanaya warbaahinta bulshada halkaasoo sawiradayda la soo bandhigay ay fiicnaadeen.
Arrin xiiso leh ayaa ah, kanaalka warbaahinta bulshada ee aan waqtiga ugu yar ku qaato ka shaqeynta… bogga Facebook, wuxuu lahaa kororkii ugu badnaa ee… 59.4% koror ah.
Dhammaan ma wada fiicna… Waxaan ogaaday in celcelis ahaan waqtigeyga ee bogga iyo bogagga booqashada booqdayaashan cusub ay hoos u dhaceen (in ka yar 10%) sidaa darteed intaan soo jiitamayo booqdayaal badan, weli shaqo weyn kama qabanayo iyaga halkan ku hayaa
Waxaan sii wadaa shaqaynta iyo u habeynta barta siyaabo kale, gaar ahaan boqolaal maqaallo duug ah usbuucii, anigoo cusbooneysiinaya qaar, qaarna ka saaray, kuwo badanna u weeciyay, kana shaqeynaya tayada guud ee goobta. Waxaan sidoo kale hirgaliyay an adeegga tarjumaadda otomaatiga ah taasoo aragtay tirada soo booqdayaasha oo cirka isku shareeray kana kala yimid wadamada aan ku hadlin Afka Ingiriiska.
Dadaalladu waxay si aad ah u bixinayaan helitaanka… sanad-sannadeedka tirakoobka 30-kii maalmood ee la soo dhaafay:
Gadiidka Tooska ah ayaa kor u kacaya 58.89%
Raadinta Noolaha ayaa kor u kacday 41.18%.
Isu socodka bulshada ayaa kor u kacaya 469.70%
Guud ahaan, degelkeygu wuxuu labalaabmay taraafikada traffic oo aan aad ugu faraxsanahay!
Ma U Baahan Tahay Caawinta Suuqgeynta Dijital Ah?
Haddii aad jeclaan lahayd xisaab hubinta bartaada oo leh xeelado gaar ah oo hagaajin kara helitaankaaga, si xor ah ula xiriir ila soo xiriir Highbridge. Waan kuu sameyn karaa xisaab hubin, waxaan ku siin karaa tababarka kooxdaada, ama xitaa waxaan kuugu qaadi karaa macmiil si aan kaaga caawiyo inaad horumariso natiijooyinkaaga suuq-geynta dijitaalka ah. Waxaan sidoo kale sifiican ugu xeel-sanahay hagaajinta bogga WordPress haddii aad ubaahantahay kaabayaal dhab ah iyo caawimaad horumarineed.
Bixinta: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran adeegyo kala duwan maqaalkan.
Tags: sawirro muuqaal ahcabirka muuqaalka warbaahinta bulshadasawirada warbaahinta bulshadaaragtida warbaahinta bulshadataraafikada warbaahinta bulshada